कसले गर्यो गायिका त्रिशला गुरुङको इन्स्टाग्राम अकाउन्ट ह्याक ? - ramechhapkhabar.com – ramechhapkhabar.com
कसले गर्यो गायिका त्रिशला गुरुङको इन्स्टाग्राम अकाउन्ट ह्याक ?
गायिका तथा चिकित्सक त्रिशला गुरुङको इन्स्टाग्राम अकाउन्ट ह्याक भएको छ । यसबारे त्रिशलाले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमार्फत जानकारी दिएकी छन् ।
आफ्नो इन्स्टाग्राम आईडी ह्याक भएको भन्दै उनले सम्बन्धित जानकारहरुसँग सहयोगको अपिल गरेकी छन् ।
उनको इन्स्टाग्राम पेजमा दुई लाख ४५ हजार फलोअर्स छन् । उनको इन्स्टाग्राम अकाउन्टलाई विभिन्न सेलिब्रेटी र हलिउड हस्तीहरुले समेत फलाे गरेका छन् ।
बलिउड अभिनेत्री तब्बूको इन्स्टाग्राम ह्याक
बलिउड अभिनेत्री तब्बूको इनस्टाग्राम एकाण्टह्याक गरेर ‘प्रमोशनल’ पोष्ट गरिएका छन्। आफ्ना पोष्टहरूमा क्लिक नगर्न अनुरोध गरेकी छिन्।
काठमाडौं। बलिउड अभिनेत्री तब्बूको इनस्टाग्राम एकाण्ट ह्याक गरिएको छ। एकाउण्ट ह्याक गर्दै विभिन्न प्रमोशलन पोष्ट गरिएको छ। पोष्टमा एक घण्टामा दुईदेखि ५ हजार रूपैयाँसम्म हरेक दिन कमाउन सकिने जानकारी दिइएको थियो।
तब्बूले सो पोष्ट ‘फेक’ भएको भन्दै त्यसमा कसैले पनि क्लिक नगर्न अनुरोध गरेकी छन्।
उनले स्टोरी शेयर गर्दै लेखेकी छिन्, “ह्याक अलर्ट । मेरो एकाउण्ट ह्याक भएको छ। कृपया मेरो एकाउण्टबाट सेयर गरिएको कुनै पनि लिंकमा क्लिन नगर्नुहोला।”
तब्बूभन्दा पहिला अन्य सेलिब्रेटीका पनि इन्स्टाग्राम ह्याक भएका थिए। अहिलेसम्म फराह खान, सुस्मिता सेन, उर्मिला मातोण्डकर, सुजैन खान, इशा देओल, अमिषा पटेल लगायतका सेलिब्रेटीको इन्स्टाग्राम ह्याक भएको थियो। उनीहरूमाथि साइबर हमला हुँदा प्रहरीको सहायता लिनुपरेको थियो।
तब्बू हरर कमेडी चलचित्र ‘भूल भूलैया–२’ मा देखिनेछिन्। यो चलचित्रमा तब्बूससँगै कात्र्तिक आर्यन तथा कियारा आडवाणी मुख्य भूमिकामा देखिनेछन्। अनिस बज्मीको निर्देशनमा सो फिल्म बन्न लागेको हो।
तब्बू अन्तिम पटक ‘जवानी जानेमन’ मा देखिएकी थिइन्। यो चलचित्रमा सैफ अली खान र अलाया फर्नीचरवालाको पनि मूख्य भूमिका रहेको थियो। उनले १९८५ मा बाल कलाकारको रूपमा चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी थिइन्। पहिलो चलचित्र ‘हम नौजवान’ मा उनको अभिनयको प्रशंसा भएको थियो।